Velan’aretina amin’ny valanaretina | NewsMada
Velan’aretina amin’ny valanaretina
Par Taratra sur 07/06/2021
Aorian’ny orana ny fiakaran’ny rano? Miroso miandalana amin’ny fiverenana amin’ny fiainana andavanandro ny vahoaka amin’izao; eny, mbola tsy mifarana tanteraka aza ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Efa misokatra ny lalam-pirenena, miverina an-tsekoly ny mpianatra rehetra, tsy tapatapaka ny fandehan’ny tsena…
Amin’izany rehetra izany, miseholany etsy sy eroa ny velan’aretina amin’ny valanaretina: fahaverezana asa, fahavoazan’ny fandraharahana… Samy tratran’ny dona sy ny fiantraikan’ny fihibohana, ohatra, ny sehatry ny fitaterana, ny fizahantany, ny fampianarana… Tsy niharihary loatra izany nandritra ny fihibohana na niainana eny ifotony aza?
Efa afaka na tapa-patorana vao mipoipoitra etsy sy eroa avokoa ny karazana fanambarana amin’ny fitarainana, ny fitakiana, ny fampitandremana aza. Hanao ahoana? Na ahoana na ahoana, tsy azo lavina ary tsy takona afenina ny voka-dratsin’ny fikorontanana fahasalamana eo amin’ny tontolon’ny toekarena, ny fiarahamonina, ny fifandraisana…
Izany koa no mampipoipoitra ny karazana asa ratsy etsy sy eroa: fisolokiana, hala-boty na hala-botry, fanambakana… Ho tonga hatraiza? Ho vita ihany ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina; farafaharatsiny, fahaiza-miaina miaraka aminy toy izay atao amin’ny areti-mifindra hafa: pesta, tazo… Tsy azo odian-tsy hita amin’izao?
Toy ny ady rehetra, misy ny fahasimbana, ny faharavana, ny faharatrana… Mila fanarenana, fanonerana, fanorenana. Tsy lavina ary tsy takona koa fa misy ny ezaka ataon’ny mpitondra fanjakana. Tsy vitan’izay, efa samy manao izay afany sy izay efany koa ny isan-tsehatra sy ny isan’ambaratonga. Na izany aza, mila fifanomezan-tanana.
Mbola ao anatin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao. Tsy tokony mbola hisy fifampitsinjovana sy fifanomezan-tanana koa ny raharaha? Tsy efan’ny irery, tsy vita indray andro… Lalina sy maharitra ary mahahenika sehatra maro tsinona ny velan’aretina amin’ny valanaretina. Mila fanefitra sy fitsaboana koa…